सक्कली हत्यारा लुकाएर ‘पागल’ लाई अघि सारेपछि...
काठमाडौं । १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिको विषयलाई लिएर कञ्चनपुरमा दैनिक आन्दोलन चर्किन थालेको छ । मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्दै पीडितका परिवार, आफन्त र स्थानीयले प्रहरी प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन चर्काएका हुन् ।
सरकार सपना बाँड्नमै केन्द्रित भयाे : शशांक काेइराला
बाँके । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले वर्तमान सरकारको कार्य प्रगति सपना बाँड्ने मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।
गृहजिल्लामा प्रधानमन्त्री अाेलीलार्इ नागरिक अभिनन्दन
भद्रपुर । गृहजिल्ला झापाको गौरादहमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि दोस्रो पटक गृहजिल्ला आएका ओलीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्षेत्र नं. ५ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गौरादह नगरपालिका र स्थानीय सङ्घ–संस्थाद्वारा नागरिक अभिनन्दन गरिएको हो ।
'गुटबन्दीले नेता कार्यकर्ता विभाजित'
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको गुटबन्दीले नेता, कार्यकर्तालाई विभाजित गरेको भन्दै यो अवस्था रहेसम्म पार्टी बलियो हुन नसक्ने बताएका छन् ।
एआईजी बढुवा प्रक्रिया बढ्यो अघिः को–को छन् दाबेदार ?
काठमाडौं । आईजीपी नियुक्त भएको १३० दिन बितिसक्दा पनि नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नियुक्त हुन सकेको छैन । गएको चैत २७ गते सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । तर, एआईजीको टुंगो भने लगाउन सकेन । सरकारले एआईजी बढुवा साउन पहिलो साताभित्र गरिसक्नुपर्ने थियो । किनकी साउन ७ गतेसम्म पुरानै कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) का आधारमा बढुवा गर्न सकिन्थ्यो । अबको बढुवा गर्दा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरिन्छ ।
भद्रपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गृहजिल्ला झापा आएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी दोस्रोपटक यहाँ आएका हुन् । उनको आज कमल गाउँपालिका र गौरादहमा नागरिक अभिनन्दन गरिने कार्यक्रम रहेको गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार साहले बताए ।
जनताले धान्न सक्ने कर लगाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कर लगाउने अधिकार भए पनि जनताले धान्न सक्ने गरी कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले नेपालमा लगाइएको कर संसारमै सस्तो भएकोे बताए ।
राप्रपा महामन्त्रीमा भाष्कर र कोषाध्यक्षमा पौडेल मनोनित
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा महामन्त्री र कोषाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको विधान अनुसार महामन्त्री र कोषाध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । ललितपुरका भाष्कर भद्रालाई पार्टी महामन्त्रीमा र काठमाडौंका उद्धव पौडेललाई कोषाध्यक्षमा अध्यक्ष थापाले मनोनयन गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रकाण्डलार्इ पक्रिदाँ प्रहरीले शाहीकालकाे सेनाले भन्दा नराम्राे व्यवहार गरे : सुदीप पाठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई अदालतको रिहा आदेशपछि पनि पक्राउ गर्दा प्रहरीले शाहीकालको सेनाले भन्दा पनि नराम्रो व्यवहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
महेश बस्नेतकाे अाराेप : खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड' अातंकवादी हुन्
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले आतंकवादीको आरोप लगाएका छन् ।